Mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland oo ka dhacay degmada Xudun, Sool, laguna dhaliilay siyaasada Puntland. – Radio Daljir
Mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland oo ka dhacay degmada Xudun, Sool, laguna dhaliilay siyaasada Puntland.
Juunyo 23, 2010 12:00 b 0
Xudun, June 23 – Dadweyne aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay degmada Xudun ee gobolka Sool, loogana soo horjeedo doorashooyinka Somaliland. Qaar ka mid ah dadka mudaaharaaday oo aan waraysanay ayaa sheegay in aanay ogolayn in wax doorashooyin ahi ay ka dhacaan degmada gaar ahaan Xudun, iyo guud ahaan gobollada Sool, Sanaag & Cayn.
Amar ka soo baxay wasaarada warfaafinta ee Puntland oo shaqada looga joojiyey idaacada Daljir.
M/weyne ku xigeenka Puntland iyo wafti uu hogaaminayo oo safar hawleed ku tagey Galkacyo, lana hadlay saxaafada.